Maleeshiyaadka Daacish oo Hooyo iyo Wiilkeed Ku Dilay Degaanka Balidhidin • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maleeshiyaadka Daacish oo Hooyo iyo Wiilkeed Ku Dilay Degaanka Balidhidin
Maleeshiyaadka Daacish oo Hooyo iyo Wiilkeed Ku Dilay Degaanka Balidhidin
October 19, 2017 - By: Omar Akhyaar
Rag hubaysan oo la aamisan yahay inay ka tirsanaayeen ururka ISIS (daacish) ayaa tuuladda Canjeel oo ka tirsan degmadda Bali-dhidin ee gobolka bari waxay ku dileen Hooyo iyo wiil laxaadkiisu dhiman yahay oo ay dhashay.
Wararku waxay sheegayaan in maleeshiyaadka Daacish ay tuuladda soo galeen abaarihii 10kii fiidnimo ee xalay, kadibna ay weerareen guri ku yaal bartamaha tuuladda oo sida ay dad goobjoogayaal shegeen, uu lahaa askari ka tirsan ciidamadda dowladda Puntland, waxaana ku noolaa gurigaasi hooyo iyo caruur ay dhashay.
“waxay ku eedeeyeen inay ninkeeda iyo walaalkeed ay ka tirsan yihiin ciidamada dowladda Puntland. waxay ku amreen inay bannaanka uga soo baxdo guriga, kadibna caruurteedii ayaa isku xeeray hooyadeed oo diiday inay ka tagaan, ka dibna xabad ayay ku fureen, waxaan halkaasi ku dhintay hooyada oo lagu magacaabi jiray Shukri muuse Cambe iyo wiilkeed oo dhago la’aa” Sidaa waxaa horseedmedia u sheegay mid ka mid ah dadka degaanka oo magaciisa qariyay.
Wararku waxay intaas ku darayaan in dadka degaanku ay aad uga xumaadeen falkaasi oo ay ku tilmaameen mid waxashnimo ah oo dhaqanka Soomaalida ka fog in la dilo hooyo iyo wiilkeeda. waxayna sheegeen in dhibaatooyin badan ay kala kulmaan kooxdaasi oo ku dhuumaalaysata buuraha iyo dhulka miyiga ee degaamaadaasi.
Dowladda Puntland ayaan weli ka hadlin dilka lagula kacay qoyska mid ka mid ah askarta dowladda Puntland.
Ururka ISIS oo sidoo kale loo yaqaan Daacish ayaa ka howlgala qayb kamid ah degaamadda gobolka bari, iyagoo sanadkii hore qabsaday degmadda Qandala, oo markii dambe ciidamada Puntland ay xoog uga saareen.